के तपाईलाई थाहा छ ? स्यानिटाइजर लगाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुुपर्छ – WASHKhabar
२८ असार २०७७, आईतवार १०:४४ 922 पटक हेरिएको
काठमाडौ : स्यानिटाइजर बारे यस अघि सुन्दै नसुनेका र नदेखेका मानिसले पनि अहिले स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोरोना भाईरसबाट जोगिन स्यानिटाइजर लगाउने वा साबुन पानीले मिचीमिची हात धुने यो तपाईको छनौटको कुरा हो ।
तर स्यानिटाइजर कति लगाउने त ? धेरैलाई यसबारे ज्ञान नहुन पनि सक्छ । आफूसँग धेरै स्यानिटाइजर हुँदा धेरै दल्ने, कम हुँदा कम दल्ने ? त्यसो होइन । स्यानिटाइजर लगाउने काम यसको उपलब्धतासँग भन्दा पनि आवश्यकता सँग सम्बन्ध राख्दछ । जुन मात्रा मिलाएर लगाउनुपर्दछ ।
वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) की शैक्षिक कार्यक्रम विकास अधिकृत चन्द्रशोभा खाईतु सिक्काको आकार जत्ति स्यानिटाइजर भए यथेष्ट काम गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘हामीसँग जत्तिसुकै भएपनि सिक्काको आकार जत्ति स्यानिटाइजर हत्केलामा लिने र हातको सबै भागमा दल्ने ।’ उहाँका अनुसार स्यानिटाइजर लगाउँदा यसको मात्रा देखि अरु पनि थुप्रै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । एन्फोकी शैक्षिक कार्यक्रम विकास अधिकृत खाईतु स्यानिटाइर लगाउँदा निम्न कुरामा ध्यान दिन सुझाउनुहुन्छ ।
स्यानिटाइजर लगाएर खाना पकाउनु हुँदैन
स्यानिटाइजर निक्कै प्रज्वलनशील वस्तु भएकाले स्यानिटाइजर लगाएर खाना पकाउँदा हात जल्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले खाना पकाउनु अघि स्यानिटाइजर दल्नु हुँदैन ।
आँखा, नाक छुनु हुँदैन
बेला बेलामा आँखा तथा नाकतिर छोइरहने कतिपय मानिसको बानी हुन्छ । यदि त्यस्तो बानी भएमा हटाईहाल्नु पर्छ । स्यानिटाइजर लगाएको हातले आँखा, नाक, मुख स्यानिटाइजर लगाउन साथ छुनुहुँदैन ।
स्यानिटाइजरमा हल्कोहल मिसिएको हुनाले कतिपय मानिसहरुमा पिउँदा पनि हुन्छ भन्ने धारणा हुनसक्छ । तर यसमा अल्कोहलका अलावा अन्य तत्वको समेत समिश्रण हुने भएकाले यो पिउनु स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ । यो बिष समान हुने भएकाले पिउनु वा खानु हुँदैन ।
बालबालिकाको पहुँच भन्दा टाढा राख्नुपर्छ
स्यानिटाइजरको बोतल केटाकेटीले भेट्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन । अबोध बालबालिकाले भेट्टाएमा खाने, आँखामा दल्ने हुँदा त्यस्ता केटाकेटीले भेट्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन ।